दुःखद खबर किर्तिपुरको आयुर्वेद कलेजमा डाक्टर पढ्दै गरेकी १७ बर्षकी गायत्री भट्टको मृ’त्यु!! – Namaste Host
March 15, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on दुःखद खबर किर्तिपुरको आयुर्वेद कलेजमा डाक्टर पढ्दै गरेकी १७ बर्षकी गायत्री भट्टको मृ’त्यु!!
किर्तिपुरको आयुर्वेद कलेजमा डाक्टर पढ्दै गर्नुभएकी गायत्री भट्टको मृ’त्यु भएको छ । भट्टलाई बिहीबार साथीहरुले छात्रवासमा अचेत अवस्थामा ओ’छ्यानमा ल’डेको अवस्थामा फे’ला पारेका थिए ।
बिहीबार बिहान साढे ८ बजे साथीहरुसँगै खाना खा’नुभएकी १७ वर्षकी भट्टलाई सोही दिनको साझँ साथीहरुले बे’होस अवस्थामा फेला पारेको कलेज प्रमुख डा.शिव मंगलले जानकारी दिनुभयो ।
बीएएमएसको प्रथम वर्षमा अध्ययनरत भट्ट सुदुरपश्चिमको टपर विद्यार्थीसमेत रहेको मंगलले बताउनुभयो । महानगरीय प्रहरी वृत किर्तिपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रुकेस त’ण्डुकारका अनुसार भट्टको कोठामा हेर्दा उहाँले अ’त्याधिक औ’ष’धि खानुभएको थियो ।
यद्यपी घ’टनाबारे छा’नबी’न भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । भट्टको श’वको पो’ष्ट’मा’र्’टमा गरिएको र रि’पोर्ट आउन बाँकी रहेको डीएसपी तण्डुकारले जानकारी दिनुभयो ।भट्टको शुक्रबार पशुपति आ’र्य’घा’ट’मा दा’हसं’स्कार गरिएको छ ।